Fanokanana: Fomba fanao tsara indrindra hialana na hanitsiana ny angon-drakitra misy an'ny mpanjifa | Martech Zone
Ny data avo roa heny dia tsy mampihena ny maha-marina ny fahitana ara-barotra, fa manimba ny kalitao koa ny traikefan'ny mpanjifanao. Na dia atrehin'ny tsirairay aza ny vokatry ny tahirin-kevitra duplicate - mpitantana ny IT, mpampiasa raharaham-barotra, mpandinika data - misy fiatraikany ratsy indrindra amin'ny asa fivarotana orinasa izany. Satria ny mpivarotra dia misolo tena ny vokatra atolotry ny orinasa eo amin'ny sehatry ny indostria, ny angon-drakitra ratsy dia mety hanala baraka ny lazan'ny marika anao ary hitarika ny fanandramana mpanjifa ratsy. Ny angon-drakitra avoakan'ny CRM an'ny orinasa dia mitranga noho ny antony maro samihafa.
Avy amin'ny hadisoan'ny olombelona ka hatramin'ny mpanjifa manome vaovao hafa kely amin'ny teboka samihafa amin'ny fotoana ao amin'ny tahiry fandaminana. Ohatra, ny mpanjifa dia mitanisa ny anarany hoe Jonathan Smith amin'ny endrika iray ary Jon Smith amin'ny lafiny iray hafa. Mihamafy ny fanamby noho ny tahiry mitombo. Matetika dia henjana kokoa ho an'ny mpitantana ny manara-maso ny DB ary koa manara-maso ny angona mifandraika amin'izany. Mihasarotra hatrany hatrany ny miantoka fa DB hatrany amin'ny fikambanana ”.
Natik Ameen, manam-pahaizana momba ny marketing ao amin'ny Canz Marketing
Amin'ity lahatsoratra ity dia hojerentsika ny karazan-tahirin-kevitra duplicate, ary paikady mahasoa sasany izay azon'ny mpivarotra ampiasaina hampihenana ny tahirin-kevitry ny orinasa.
Karazan-drakitra samihafa amin'ny data avo roa heny
Ny angona duplicate dia mazàna nohazavaina ho dika mitovy amin'ny tany am-boalohany. Saingy misy karazana data data tsy mitovy izay manampy fahasarotana amin'ity olana ity.
Dupliky marina amin'ny loharano iray ihany - Izany dia mitranga rehefa afindra amin'ny loharanom-pahalalana hafa ny firaketana an-tsoratra avy amina loharanom-pahalalana iray nefa tsy misy teknika fampifangaroana na fampifangaroana. Ohatra iray ny fandikana vaovao avy amin'ny CRM mankany amin'ny fitaovana marketing amin'ny mailaka. Raha ny mpanjifanao dia nisoratra anarana tamin'ny mailakao, dia efa misy ao amin'ny fitaovam-pivarotana mailaka ny rakitsoratr'izy ireo, ary ny famindrana angona avy amin'ny CRM mankany amin'ilay fitaovana dia hamorona kopia mitovy dika mitovy aminy.
Dupliky marina amin'ny loharano marobe - Matetika ireo duplicate amin'ny loharano marobe dia mipoitra noho ny fandraisana an-tanana ny backup amin'ny orinasa. Ireo fikambanana dia mirona hanohitra ny hetsika fanadiovana data, ary mora mitahiry kopia data rehetra ananan'izy ireo. Mahatonga loharano tsy mitovy misy fampahalalana dika mitovy.
Miovaova ny dika mitovy amin'ny loharano marobe - Ny duplates dia mety misy miaraka amin'ny fampahalalana miovaova koa. Matetika izany dia mitranga rehefa mandalo fanovana amin'ny anarana farany, anaram-asa, orinasa, adiresy mailaka sns, ny mpanjifa sns. Ary satria misy ny tsy fitoviana lehibe eo amin'ny rakitsoratra taloha sy vaovao, ny vaovao miditra dia raisina ho toy ny orinasa vaovao.
Duplikate tsy marim-pototra amin'ny loharano mitovy na marobe - Ny duplicate tsy marim-pototra dia rehefa ny soatoavina angon-drakitra dia midika zavatra mitovy, fa misolo tena amin'ny fomba samihafa. Ohatra, ny anarana Dona Jane Ruth dia azo voatahiry ho Dona J. Ruth na DJ Ruth. Ny sanda data rehetra dia maneho zavatra iray ihany fa raha ampitahaina amin'ny teknikan'ny fampifanarahana data tsotra dia heverina ho tsy mitovy.
Ny fanamasinana dia mety ho dingana sarotra tokoa satria ny mpanjifa sy ny orinasa dia manova matetika ny angon-drakitra ifandraisany rehefa mandeha ny fotoana. Misy tsy fitoviana amin'ny fomba fampidirany ny sehatra data rehetra - avy amin'ny anarany, adiresy mailaka (es), adiresy fonenana, adiresy orinasa, sns.
Ity misy lisitr'ireo fomba fanao fampihenana data 5 izay azon'ny mpivarotra manomboka ampiasaina ankehitriny.
Paikady 1: manaova fanamarinana momba ny fidirana data
Tokony hanana fanaraha-maso henjana amin'ny tranokala fidirana data ianao. Midika izany fa miantehitra amin'ny data, ny endrika ary ny lainga eo anelanelan'ny elanelana azo ekena ny angon-drakitra. Mety handeha lavitra eo amin'ny fanaovana ny angon-drakitrao feno, marina ary marina. Ankoatr'izay, zava-dehibe ny fisehanan'ny workflow fidiranao data mba hamoronana firaketana vaovao fa hikarohany aloha ary hahitana raha toa ka misy rakitsoratra efa misy mifanaraka amin'ny atiny iray ny angona. Ary amin'ny tranga toa izany dia mahita sy manavao ihany izy fa tsy mamorona firaketana vaovao. Orinasa maro no nanisy fanamarinana ho an'ny mpanjifa hamaha ny angon-drakitra avoakany manokana ihany koa.
Paikady 2: manaova fanokanana amin'ny alàlan'ny fitaovana mandeha ho azy
Mampiasà fanompoan-tena rindrambaiko fanatontosana angona izay afaka manampy anao amin'ny famantarana sy fanadiovana ireo firaketana misy dika mitovy. Ireo fitaovana ireo dia afaka manara-penitra ny angona, mahita marina ny lalao marina sy tsy marina, ary izy ireo koa dia mampihena ny asa tanana amin'ny fijerena angon-drakitra an'arivony maro. Hamarino tsara fa manome fitaovana ho an'ny fanafarana data avy amin'ny loharano isan-karazany toy ny excel sheet, database CRM, lisitra, sns, ilay fitaovana.
Paikady 3: Mampiasà teknika fanokanana manokana data
Miankina amin'ny natioran'ny angon-drakitra, tsy mitovy ny fanatanterahana ny data. Ireo mpivarotra dia tokony hitandrina rehefa manaparitaka data satria ilay zavatra mitovy dia mety hidika zavatra tsy mitovy amin'ny toetran'ny data isan-karazany. Ohatra, raha toa ka mifanaraka amin'ny adiresy mailaka ny firaketana angona roa, dia azo inoana fa duplicate ireo. Fa raha misy rakipeo roa mifanindry amin'ny adiresy, dia tsy voatery ho duplicate izany, satria olona roa an'ny iray trano dia mety hanana fisoratana anarana samihafa ao amin'ny orinasanao. Aza hadinoina ny mampihatra ny fampihenana ny angon-drakitra, ny fampifangaroana ary ny hetsika fanadiovana arakaraka ny karazana data ao anaty angon-drakitrao.
Paikady 4: mahazoa ny rakitsoratra Master Golden amin'ny alàlan'ny fampiroboroboana angona
Raha vantany vao voafarinao ny lisitry ny lalao misy ao anaty data-nao dia zava-dehibe ny fandinihana ity fampahalalana ity alohan'ny handraisana ny angon-drakitra sy ny fanadiovana hevitra. Raha misy firaketana maro ho an'ny orinasa tokana ary misy ny misolo tena ny vaovao tsy marina dia tsara kokoa ny manadio ireo firaketana ireo. Etsy ankilany, raha tsy feno ny duplicate, dia safidy tsara kokoa ny fampitambarana angon-drakitra satria ahafahana manankarena angona, ary ny firaketana an-tsoratra dia mety hanome lanja bebe kokoa ny orinasanao.
Na izany na tsy izany, ny mpivarotra dia tokony hiasa hahazoana fomba fijery tokana amin'ny fampahalalana momba ny varotra, antsoina hoe firaketana an-tsoratra volamena.
Paikady 5: Fanaraha-maso ireo mari-pamantarana kalitaon'ny data
Ny ezaka mitohy hitazonana ny angon-drakitrao madio sy alaina no fomba tsara indrindra hanatanterahana ny paikadim-pitondrana data. Fitaovana manolotra firaketana ny profil sy ny endri-pitantanana kalitao azo ampiasaina eto. Ilaina tokoa ny manara-maso ny mpivarotra raha marina, marina, feno, tsy manam-paharoa ary mifanaraka ny angon-drakitra ampiasaina amin'ny asa marketing.
Rehefa manohy mampiditra rindran-drakitra amin'ny fizotran'ny orinasan'izy ireo ny fikambanana dia nanjary nilaina ny manana paikady fanapahana data. Ny fandraisana andraikitra toy ny fampiasana fitaovana fanatontosana angon-drakitra, ary ny famolavolana ny alàlan'ny fanamarinana tsara kokoa amin'ny famoronana sy fanavaozana ny firaketana ny angona dia paikady lehibe iray ahafahana mamela ny kalitaon'ny data azo itokisana ao amin'ny orinasanao.
Momba ny Ladder Data
Data Ladder dia sehatra fitantanana kalitao momba ny angon-drakitra izay manampy ireo orinasa amin'ny fanadiovana, fanasokajiana, fanarahana fenitra, fanafoanana, famoahana profil ary fampiroboroboana ny angon-drakitra. Ny rindrambaiko fampifangaroana angona nateraky ny indostria dia manampy anao hahita rakitsoratra mifanentana, hanakambana angon-drakitra ary hanaisotra ireo duplicate amin'ny alàlan'ny algorithms fuzzy manam-pahaizana sy ny algorithma fianarana milina, na aiza na aiza misy ny datao sy ny endriny.
Misintona andrana maimaim-poana amin'ny lozisialy fampifanarahana data amin'ny tohatra data
Tags: adiresy fanamarinanaaifahaizana artifisialyafaka marketingangona ho an'ny mpanjifafanasokajiana datafanadiovana datafampiroboroboana angonatohatra tohatrafampitahana datafamaritana datafanamafisana ny datadedupfanokananamanaova tahirin-kevitra momba ny mpanjifafampifangaroana manjavozavofianarana milinanatik ameen